प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने अर्को साता टुंगो लाग्ने। – कर्णाली 24 डट कम
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने अर्को साता टुंगो लाग्ने।
Karnali 24१९ असार २०७८, शनिबार ०७:३९
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ।
अब आइतबार सभामुखका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफस्वरूप बहस गर्नेछ। अन्तिममा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले बहस गर्नेछन्। सोमबारसम्ममा बहस सकिने आकलन गरिएको छ। त्यसपछि अदालतले विघटनको विषयमा निर्णय दिनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले एकै किसिमका तर्क दोहो¥याए प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ विषयमा मात्र बोल्न आग्रह गरेका थिए।
पहिलो पटक पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा डेढ महिना लगातार बहस भएको थियो। रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा धेरै समय लिने र तर्क दोहो¥याउने गरेका थिए। त्यसकारण यसपटक कानुन व्यवसायीलाई एकमुष्ठ समय तोकेर बहस गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। यसपटक राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउने÷नपाउने र संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यामा बहस केन्द्रित भयो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
आउटगोइङ कल गइरहेको छ, कसरी ओलीले करिश्मालाई फोन गरे?
२ आश्विन २०७८, शनिबार २०:५६
चर्चित गायिका अन्जु पन्तले दाेस्राे विवाह गरिन्।
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०२:३३
जसपा बाट राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री सहित ८ मन्त्री र २ राज्य मन्त्री, आजै सपथ
२१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १८:२१
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण निधन
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १८:५४
तनावग्रस्त कैलालीको लम्की, प्रहरीले गोली चलाउँदा दुईजना घाइते।
१० चैत्र २०७७, मंगलवार १७:४७
भीम रावलले ऐमाले छाेड्ने संकेत?? १९ असार २०७८, शनिबार ०७:३९
कोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली प’क्राउ १९ असार २०७८, शनिबार ०७:३९
नायिका रेखा थापा राप्रपा पार्टीको महामन्त्री पदमा उठ्दै १९ असार २०७८, शनिबार ०७:३९